မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: တစ်ဆစ်ချိုး...
Posted by mabaydar at 5:11 AM
အလွမ်းပြေလာဖတိသွားပါတယ် မဗေဒါရေ။ မဗေဒါရဲ့ ဘလော့ကို အမြဲနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အားပေးနေကြပါ။ comment အမြဲမရေးဖြစ်ပေမဲ့ပို့စ်တင်တိုင်းဖတ်ဖြစ်တာပါ။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ဘလော့ပါဆိုတာ အပြင်မှာ မတွေ့ဘူးလဲ စိတ်ထဲက ရင်းနှီးနေတာမျိုးပါ။ မဗေဒါကို အပြင်မှာ အမှတ်မထင်တွေ့မိတော့လဲ ကိုယ်နဲ့ဟိုးအရင်ထဲက သိနေသူတယောက်လို ခံစားရတာ။ ရင်းရင်းနှီးနှီးမိတ်ဆွေပြန်ဖွဲ့ပေးလို့လဲအရမ်းဝမ်းသာရတာပါ။ ကိုယ်သိချင်တဲ့ drama အကြောင်းတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ခရီးသွားတော့ပစ်တွေ ကိုယ် သဘောကျတဲ့စတိုင်နဲ့ ရေးတတ်သူမို့ အရင်ကလဲ အားပေး အခုလဲ အားပေး နောင်လဲ အားပေးနေဦးမှာပါ။ ကလေးတယောက်နဲ့မအားတာတော့ ဘယ်လောက်တောင် ကိုယ်ချင်းစာလဲဆိုရင် ဒီ comment တောင် သုံးပိုင်းခွဲရေးလိုက်ရတယ်။ ��
9/14/2019 7:10 AM
9/14/2019 7:32 AM
ေနရာအသစ္ေလးေတြ ဇာတ္ကားအေၾကာင္းေလးေတြ ဖတ္ၿပီး သေဘာက်ခဲ့သူပါ ကေလးေမြးထားလို႕ အလုပ္ရွဳပ္ေနတယ္ပဲ ထင္တာ စလံုးကေန ေျပာင္းသြားတာ ေပါ့ ေနရာအသစ္ေရာက္ေတာ့ ဖတ္စရာအသစ္ေလးေတြရလာေတာ့မယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ❤️
9/14/2019 9:58 AM
Noe Now said...
အမ blog ​တွေဖတ်ပီး အမကိုစသိတာ
9/14/2019 10:19 AM
9/14/2019 10:20 AM
I also feel blog browsing is healthier than Facebook scrolling mindlessly
I cannot wait to read your blog posts. :)
9/14/2019 12:55 PM
9/17/2019 5:54 PM
ဘေလာ့မွာ ျပန္ဖတ္ခ်င္တာေလးေတြ search ျပန္လုပ္လို႕ရတာ တဂ္ေလးေတြႏွိတ္လို႕ရတာပိုၾကိဳက္တယ္
ဖဘမွာေတာ့ ဖတ္တယ္ပီးျပီးေရာပဲ အင္ဖို/ရီဗ်ဴး ျပန္ရွာဖို႕လည္းမလြယ္ ႏိုင္ငံအသစ္အေၾကာင္းေရးျဖစ္ရင္ေတာ့ ဘေလာ့မွာပဲ တင္ပါေနာ္
9/23/2019 12:47 PM
9/24/2019 3:57 PM
rakhine nwe said...
I always read your blog and every time visit your blog.Wish you new palce par.